Geelloow: horumarin af mise horseed aafo?! Q1AAD – Bashiir M. Xersi
Sida caadigaa ama maangalka ah waxay tahay, inay kala mudan yihiin nin arrin u soo dhabar jabay iyo nin maanta soo isgaatay, ee aan waxba u soo qaban. Kuma lihi Cali Mahdi lug kuma lahayn talada xilka looga qaadayo Kali Taliye; Maxamd Siyaad Barre, balse, Jabuuti taa baddalkeed baa ka dhacday, oo waxaa shirkaa lagu abaalmarshay rag aan u soo dhibaatoon sidii Kali Taliye; Maxamd Siyaad Barre xukunka looga tuuri lahaa, kaaga darane, waxayba u badnaayeen raggii shalay baallaha uga jiray Rajiimka, waxaa xusid mudan, in ay Muqdisho ka dheceen mudaharaadyo looga soo horjeedo shirkaa iyo natiijada ka soo baxdayba.
Midda kale, maxay ka walaxtay in Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu kali la noqdo magacaabista toban Xildhibaan oo Soomaali ah? Kaba xune, oo haddana, ka dhigay toban wadaad, meesha ma xil siyaasadeed baa lagu qaybsanayey, ma xil wadaad, ma xil beelo kala mudan yihiin, mise waxaa lagu dhisay dawlad Soomaali [Koofur iyo Waqooyi]? Run ahaan, dhacdadaana wax ka gadooday ama ka hadlay ma jirin, iyana sidaa ayey ku martay.
Siddeed sano ka dib, waxaa mar kale shir la isugu tagay Jabuuti, ee kala dhacay horraantii iyo dabayaaqadii sanadkii 2008-dii. Maalintaa shaarka AFAR iyo BARKA waxaa ku wehliya mid kale oo ka sii dacar badan, waana SHAAR DIIMEED, ha illoobin shirkii Carta baa waxaa ku jiray toban Xildhibaan oo Mudane Geelle Magacaabay, oo dhammaan wada ahaa WADAADDO. Maanta waxaa shirka jooga kuwo magac Diimeed ku yimid, aqriste, maxaa kuu baxay? Isku xir fiican ma samaysay?.
Previous Previous post: Afka ha la oon tiro! Qormo dhaxalgal ah!
Next Next post: Geelloow: horumarin af mise horseed aafo?! Q2AAD